Amalungelo okusebenzisa i-Camera-Worn Camera Camera | Izisombululo ze-OMG
Ngexesha le-hyper-vigilance, iikhamera zazo zonke iintlobo ziye zaba liso lesithathu elibonwa ngabantu bonke kunye nokurekhoda. Omnye wokugqibela ukujoyina yikhamera yomzimba, eyilelwe ukuba isebenzise amapolisa, ukubamba zombini indlela yokuziphatha kwabasebenzi kunye nexesha olwenziwe ngalo ulwaphulo-mthetho. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwayo kuya kufikelela nakwezinye iinkalo zobungcali nakwicandelo lezemfundo. Le boom ivula ingxoxo-mpikiswano entsha malunga nokugqithisa okanye ukungaphaphami kunye notshintsho kwindlela yokuziphatha ehambelana nayo.
Ngokungathandabuzekiyo iminyaka yokuphumelela kwiikhamera, ngaphaya kwefashoni yentonga ye-selfie, ngokunyuka kweekhamera zentshukumo kunye neGoPro njengowona mgcini mkhulu; oopopu ababukele iintshukumo zamapolisa; ii-application zokusasaza zasimahla ezisasaza ubomi bonke abantu; okanye izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokhuseleko ngokubona kobuso. Amaxesha amaninzi nangaphezulu ebomini bethu athatyathwa yikhamera, ke imibuzo emitsha iphakanyiswa malunga nokuba kuthetha ntoni ukuhlala phantsi kokujonga ngeliso lesithathu.
Ngokukodwa, iikhamera zomzimba okanye ikhamera yomzimba yamkelwe kakuhle kwizixeko ezininzi, njengoko zithathwa njengesixhobo sokulawula kunye nesixhobo sokulwa namandla okulwa namandla amapolisa. Ezi zixhobo ezincinci ezingangenisiyo eziqhotyoshelwe kwifom yearhente kubude begxalaba, ukurekhoda ngokufihlakeleyo ngaphandle kokuphazamisa inkonzo yakho yemihla ngemihla. Banokwenza ifilimu ngokuqhubekayo, benethuba lokulayisha ngokuzenzekelayo iividiyo kwilifu.
Ngelixa ulawulo lwamapolisa kunye nokusebenza kuhlala kunqabile kwiindawo ezinobunzima, ividiyo iyinto ebalulekileyo yokunyanzeliswa komthetho. Baphethe umtya kwiyunifomu esifubeni, iikhamera zoxande ezinobukhulu be-walkie-talkie ziya kuvumela amapolisa kunye nabantu ababhinqileyo ukuba baveze ungenelelo lwabo bukhoma. Iidigri ze-360 ezinokuhlengahlengiswa, iilensi zazo ezibanzi zinokubamba nasiphi na isigameko, imini okanye ubusuku, kwinqanaba lamapolisa asebenzisa esi sixhobo kuxhomekeka kwimeko. Ukuqukumbela uluhlu lwamagosa ethu, ezi khamera ngoku zibonelela ngazo zonke iindlela zokucacisa iimeko zokucekiswa kunye nokuqinisekisa ukuthembeka kwamaarhente ethu ngexesha lokujongwa nokumiswa. Imifanekiso kunye nesandi, ezirekhodwe kwimemori khadi, ziyaxhonywa zibuyele kwisikhululo samapolisa kwii-CD-Roms. Zonke ezi ziqwenga zobungqina ezinokufakwa kwimizuzu echaza iinyani kwaye ezinokondla inkqubo ngezibonelelo ezinje-
Esi sixhobo sikwabandakanya isoftware ekhethekileyo egcina kunye neekhathalogu ezirekhodiweyo kunye nokukhusela naluphi na uhlobo lwenguqu okanye utshintsho. Kwaye kwimeko yobusela okanye ilahleko, ikwanikezelwa nangomatshini wokutshixa. Bayakuvumela ukurekhoda ngokuqaqamba okuphantsi kwaye kwiimeko ezigqithisileyo.
Injongo icacile kuba ivumela ukuthathwa kokubini kokuziphatha kwearhente- efanelekileyo okanye hayi - naxa ulwaphulo-mthetho lwenziwe. Nangona kunjalo, olu hlobo lwesixhobo alusebenzisi amapolisa kuphela. EAsia, umzekelo, ukusetyenziswa kwayo kwabacimi-mlilo, oonogada, ukujikeleza elwandle, ulawulo lwezilwanyana okanye nakwicandelo lezemfundo sele kuqwalaselwa, kuxhobisa abalawuli kunye neenqununu ezincedisayo ngeekhamera zomzimba kunyaka olandelayo wesikolo ukubhalisa ubudlelwane babo nootitshala kunye abafundi.
Izixhobo zivumela iinkqubo zokurekhoda ngexesha langempela. Zisizisiwe kwangoko, isixhobo siqala ukurekhoda kwaye asinakho ukwenziwa gwenxa ligosa kuba ulwazi kuphela olukhutshelweyo ngexesha lehift liphela, kwelinye lamaziko okuqokelela, apho xa lifika lifuneka ukuba libaxhume kwaye lichwethe umsebenzisi Kulapho esikrinini banokukhuphela iifayile kwisiseko esembindini kunye nokujonga kwangaphambili oko bakwenzileyo ngexesha elithile, kodwa abanakukwazi ukuziguqula okanye ukuzicima.
Ngendlela efanayo, esi sixhobo sirekhoda ngokusisigxina iividiyo ezigcweleyo ze-HD (ngexesha langempela), iaudio kunye ne-geolocation, okuthetha ukuba kumaziko olawulo ahlukeneyo baya kukwazi ulwazi ngokubanzi malunga nokuba ngubani ophetheyo. Enye inzuzo kukusetyenziswa kwevidiyo njengobungqina enkundleni.
Izixhobo zokwakha kwesi sixhobo, ezongeziweyo ngokubanzi, zingumsebenzi onzima kunye nokumelana nokukhwankqiswa, kuba zenziwa ukuba zikwazi ukumelana neemeko ezinzima zelanga kunye namanzi ngaphandle kokusilela.
Iikhamera zomzimba zinokusetyenziswa njengenyathelo lokhuselo. Xa umntu esiba ndlongondlongo kwaye axelelwe ukuba uyarekhodwa okanye ubona ikhamera, iguqulela kutshintsho kwindlela yokuziphatha, luluhlu olongezelelekileyo lokhuseleko. Kwakhona, uphononongo lubonisa ukuba abemi baziphatha ngcono xa barekhodwa.
Ividiyo yeekhamera igcinwa kwaye ilawulwa liSebe lamapolisa kwaye igcinwe kwiseva ekhuselekileyo. Ngaphandle kweendleko zokuqala zokuthenga izixhobo lixabiso lexesha elide lokugcina idatha yenkqubo.
Ngokukodwa, idatha yekhamera yomzimba ibonise ukwehla kwezikhalazo ngokuchasene neearhente, kunye nokwehla okukhulu ekusebenziseni kwamandla ngamagosa. Ezinye izibonelelo zeekhamera zomzimba eziboniswe kweli lizwe kwaye ukuba ngoku sinamava kuvavanyo lwethu kukonyuka kokusebenza elubala. Yonke into iyenziwa ngevidiyo kwaye ukuba izaziso zikarhulumente kunye negosa liyayazi, wonke umntu uziphatha ngcono.
Ividiyo irekhodwe ngokwembono yegosa kwaye ibambe iidigri eziyi-130. Njengoko iiarhente ezahlukeneyo zivela kwindawo uneeengile ezahlukeneyo.
Olu phando lubonisa ukuba umhlaba onokuba neekhamera zokujonga ngakumbi zinokuba, ngendlela ethandekayo nangokhuseleko. Kodwa njengoko ubonelelo lobuchwephesha lukhula, kukwakhona amathuba okuba kusetyenziswe ngokungakhathali. Kwezi zinto zongezwa ulwandiso lobukho bemfazwe. Oku kuvelise, umzekelo, ukufudumeza iingxoxo malunga nendlela amapolisa anokuzisebenzisa ngayo iikhamera ukuba zingasetyenziswa naphi na, okanye ixesha lokucima urekhodo.
Njengoko ezi ziitekhnoloji ezivelayo, akukho mgaqo ungqongqo ekusebenziseni kwawo, ngoko sinokuvezwa ukurekhodwa okuqhubekayo naphi na apho siya khona, ngaphandle kokulawula ukuba ngubani onokubona le mifanekiso. Nangona kunjalo, le meko inokuba nesiphumo esingalindelekanga ekuveliseni uluntu olunomonde ngakumbi. Kwaye nokuba siyawuxabisa umsebenzi wabanye ngakumbi.
Amalungelo okusebenzisa i-Camera-Worn Camera Camera gqibela ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
4428 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje